PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-09-24 - UMQEQESHI UNOVALO LWEZITHA
UMQEQESHI UNOVALO LWEZITHA
Ilanga langeSonto - 2017-09-24 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UNOVALO lwezitha uroger Sikhakhane ( osesithombeni) ongumqeqeshi werichards Bay FC ezovovana inkani netshakhuma Tsha Madzivhandila FC engomakoti kwinational First Division (NFD) emdlalweni weligi onamuhla ngesonto ngo-15h00 emhlathuze Sports Complex, erichards Bay.
Usikhakhane utshele ILANGA LangeSonto ukuthi ukuba yincwadi evaliwe kwezitha kakumniki ukuthula emphefumulweni. Uthi unethemba lokuthi inhlanhla izobavakashela kulo mdlalo njengoba ekholwa wukuthi bashaye into ephansi kwedlule ngenxa yamashwa.
“Amalungiselelo ahamba kahle, sesiwaqinise wonke amabhawodi abexega ekilabhini. Ngizokuya kulo mdlalo ngaphandle kukajunior Sekese okhishwe ngekhadi elibomvu emdlalweni wethu nejomo Cosmos ngeledlule. Kumele noma kanjani siwunqobe lo mdlalo ukuze abadlali bezobuyelwa wukuzethemba.
“Empeleni kuningi kakhulu okuhle okwenziwa ngabadlali, sekusele ukuthi sinqobe umdlalo wethu wokuqala ekhaya ngenqwaba yamagoli. Iseyinde indlela kulesi sigaba, abalandeli bekilabhu mabangathuki. Umehluko okhona phakathi kwekilabhu eqhwakele nathi mncane kakhulu, kusengenzeka noma yini,” kusho usikhakhane ogcizelele ukuthi ubheke ubunzima kule kilabhu eyincwadi evaliwe kuyena.
Kuzo ezeNFD, uzama inhlanhla kwijomo Cosmos umduduzi Sibeko oyisitobha kwi-acornbush United edlala kwisouth African Football Association (Safa) Mpumalanga ABC Motsepe League.
Udavid “DVD” Mathebula unikwe ithuba lokuzama umsebenzi kwiblack Leopards eshaywa sengathi iyabukisa kule sizini.
Omunye umdlalo WENFD onamuhla ngesonto ngophakathi kweUbuntu Cape Town nejomo Cosmos ozoqala ngo-15h00 e-athlone Stadium.